Soomaaliya oo Heshiis saameyn ku leh doorashada 2020 la gashay Pakistan
ISLAMABAD - Dowladda Pakistan ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan $10.5 million [Toban Milyan iyo Shan Boqol oo Kun oo Dollar], taasi oo ugu tala gashay in dowladda Federaalka ka uga caawiso sameyn kaararka aqoonsiga.
Hay’adda Macluumaadka Qaranka iyo Diiwaan-gelinta Pakistan, ee loo yaqaan NADRA, ay siin doonta Soomaaliya, Tik-noolojiyad iyo Qalab ka caawinaya diiwaan gelinta muwaadiniinteeda kahor doorashada 2020.
Xafladda saxiixa, Soomaaliya waxaa uga qeyb-galay Wasiiru Dowladaha Wasaarada Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Faraax Wehliye, iyadoo uu goobjoog ahaa Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Shahid Khaqan Abbasi.
Dhanka Pakistan, waxaa Munaasabada joogay Wasiirka Maaliyadda Miftah Ismail, Kaaliyaha Gaarka ah ee Ra'iisul Wasaaraha Musadiq Malik, xoghaynta xisaabaadka maaliyadda iyo arrimaha gudaha, guddoomiyaha hay’adda Nadra iyo saraakiil sare.
Dhanka Soomaaliya waxaa sidoo kale ku metalaysay Safiirka Soomaaliya ee Pakistan, Marwo Khadija Mohamed Almakhzoumi, Madaxa Mashruuca Aqoonsiga Nur Derie Hersi iyo xubno oo sar-sarre oo dowladda Federaalka ka tirsan.
Cabdullaahi Faraax Wehliye oo goobta hadal kooban ka jeediyay wuxuu uga mahad-celiyay dowlada Pakistan taageerada ay siiso Shacabka Soomaaliyeed, iyo sida ay mar walba ugarab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed
Wuxuu tilmaamay si loo xoojiyo xiriirka labadda dowladood in Pakistan ay Safaraad ka furato Magaalada Muqdisho, taasoo uu tilmaamay inay kasii qeyb qaadanayso sare usii qaadida xiriirka labada geesoodka ah ee labada dhinac.
Wasiirka Maaliyadda Pakistan, Miftah Ismail oo si diiran usoo dhaweeyay hadalka Wasiiru dowladaha wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladiisa uu qiimo wayn ugu fadhiyo xiriirka ay la leedahay Dowlada iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Tani ayaa waxay ka caawin doontaa dowlada Soomaaliya maareynta Xuduudaha iyo maareynta nidaamka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya sanadka 2020, taasoo la qorsheynayo inay noqoto mid qof iyo cod ah.
Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo iyo mid walaal-tinimo, iyadoo heshiiskaan oo ah mid dhaxal gal ah uu sare usii qaadayo xiriirka, waxaana mashuurcaan uu qeyb ka yahay siyaasada xoojinta awooda Pakistan ee Afrika.
Soomaaliya: Doorashada 2020 oo war cusub laga soo saarey
Soomaliya 08.06.2018. 16:08
Hogaamiyaasha dalka ayaa qoraalkii ay kasoo saareen Shirkii Baydhabo ku sheegay...
Madaafiic lagu weeraray xarunta AMISOM ee Xalane iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 01.01.2019. 16:23
Ehelada dadka ay ciidamada AMISOM dileen oo cadaalad dalbaday
Soomaliya 06.11.2018. 16:53
AMISOM oo shaacisay caqabadaha hortaagan dagaalka Shabaab
Afrika 31.05.2018. 12:01
Khilaaf soo kala dhex-galay AMISOM iyo hogaanka ciidanka Kenya
Soomaliya 01.04.2019. 17:28